ယူအေအီးအတွက်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူမှုများနှင့်ယောဘသည်များအတွက် Whatsapp Group မှ join
အောက်တိုဘာလ 7, 2017
ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်များအတွက် WhatsApp ကိုအုပ်စု
Whatsapp Group မှပင်လယ်ကွေ့, ဒူဘိုင်း, အဘူဒါဘီနှင့်ကာတာနိုင်ငံအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့။ ယူအေအီးအပေါ်များတွင်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေဤသည်နေ့ရက်သည်ရဲ့အများအပြားကျွမ်းကျင်သူများ WhatsApp ကို အုပ်စုများ။ သို့သော်အဖြစ်မှန်အတွက်မဟုတ်ဘဲလူတိုင်းဝမ်းသာဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့ ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီအတွက်အလုပ်။ ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူများ 70% ကျော်ပြောင်းရွှေ့ယူဆပါစို့ ပြည်ပမှာအနေဖြင့်ဒူဘိုင်းမှ.
မရတိုင်းအလုပ်ပေါ်တယ်ဖြစ်ပါသည် စုဆောင်းမှုရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဖော်ရွေ။ ဒါ့အပြင်ကြောင်းစုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများ၏ထိပ်ပေါ်မှာ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်ကျေနပ်အလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှုမပေးပါဘူး။ ဒါကြောင့်ငါတို့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကအများအပြားစီမံကိန်းများကိုလုပ်ကိုင်စတင်သည်။ ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျနော်တို့ WhatsApp ကိုအုပျစုမြားကိုစတင်ခဲ့ပါပြီ။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအမြဲကူညီပေးနေမျှော်လင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအသစ်ကယောဘကို Start!
ဒါကြောင့်သင်ကယူအေအီးမှာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာနေတယ်ဆိုရင်။ ငါတို့လူကြိုက်များ Join ကျေးဇူးပြုပြီး ဒူဘိုင်းအတွက် WhatsApp ကိုအဖွဲ့များ။ ကြှနျုပျတို့မှာ အစဉ်အမြဲအသစ်အကျွမ်းကျင်သူများအဘို့စောင့်ဆိုင်းနေ။ ဒါ့အပြင်ယူအေအီးအတွက်စုဆောင်းမှုအေးဂျင့်ဒီရက်အချို့ကို။ WhatsApp ကိုမိုဘိုင်း application ကိုကျော်အလုပ်အကိုင်များကြော်ငြာပေးပို့ခြင်း။ ဒါကြောင့်ငါတို့ WhatsApp ကိုအုပ်စုတစုဖြစ်ပါသည် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာနေကြသူကျွမ်းကျင်သူများဖန်တီး။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အချိန်ဖြုန်းနဲ့သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အသေးစိတျ upload တင်ကြဘူး။ ထိုမှတပါး, ဒူဘိုင်းအတွက်အသစ်တခုပျော်ရွှင်ဝန်ထမ်းဖြစ်လာသည်။
ယခုကြှနျုပျတို့အလွန်လှုံ့ဆော်မှုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူများအတွက်အများအပြားတောင်းဆိုမှုများရှိခြင်းနေကြသည်။ ကျေးဇူးပြု လူကြီးမင်း၏ CV ကို upload ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏ပရိုဖိုင်းကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အခွင့်အလမ်းရှိခြင်းလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့အဘို့ရှာကြသည် ဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်စတင်ရန်ချင်ပါတယ်တဲ့သူတောင်အာဖရိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူ။ ဒါကြောင့်နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ WhatsApp ကိုအုပ်စုကိုပေါ်တွင်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
သငျသညျအမြင့်ဆုံးသယံဇာတများကိုသုံးပါလိမ့်မယ်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ ဤမျှလောက်များစွာသောရှိပါတယ် အလုပ်အကိုင်အက်ဘ်ဆိုက်များ သင်ကသင့်ရဲ့ updated ကိုယ်ရေးရာဇဝင် post လုပ်နိုင်ပါတယ်ရှိရာ။ အခြားသူများကိုသူတို့နှင့်အတူကွန်ယက်စကားပြောရန်ကြိုးစားပါ။ စုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီများမှငှားရမ်းဘယ်မှာဘယ်လိုထွက်ရှာမည်။ အားလုံးကြောင်းကျိန်းသေသငျသညျယူအေအီးအသစ်အလုပ်အကိုင်များဆင်းသက်ကူညီပေးပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ WhatsApp ကိုအဖွဲ့များ Links များမှ Join!
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာရုံစိုက်မှုပြောင်းလဲ Philipino အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ယူအေအီးအတွက်ရှာဖွေနေသူ။ အဆိုပါ join Whatsapp ဟိုတယ်, ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့, အိုင်တီအရောင်းနှင့်သင်တန်း၏စျေးကွက်များအတွက် Group မှ ဒူဘိုင်းအတွင်း အခြေစိုက်စခန်း မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွက်ဂျော့ဘ် အလုပ်များနှင့်မွမ်းမံမှုများ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူမှုလုပ်ငန်း၏အပြုသဘောဆောင်သည့်ဘက်တွင် ပစ္စုပ္ပန်အချိန်ကိုအခြားသူများကူညီပေးနေ.
ကျနော်တို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖောက်သည်အချို့ရှိခြင်းနေကြသည်, သူတို့ကအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ချင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတက်ကြွကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုငှားရမ်း။ သငျသညျအမှန်ပင်သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်လုပ်နိုင်တဲ့ပြောင်းလဲနိုင်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ WhatsApp ကို join စုဆောင်းမှုချက်ချင်း။
သင်လက်ရှိနီးပါးမည်သည့်အကြီးတန်းအဆင့်ဆင့်မှအငယ်တန်းအဆင့်ဆင့်ကနေအလုပ်လုပ်နေလျှင်နိုင်ရန်အတွက်ထားရှိရမည့် ဒူဘိုင်းအတွက်မော်တော်ယာဉ်ဌာနအလုပ်အကိုင်များ ထုတ်လုပ်မှု, HR, admin ရဲ့ R & D ကို, ကမ်းလွန်ရေနံ, ကုန်းတွင်း, အရောင်း & စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်တူ။ ဒီနေရာမှာသတိရဖို့ပထမဦးဆုံးအရာပဲ, သင့်မိုဘိုင်းနံပါတ်နှင့်အတူဤနေရာတွင်မှတ်ချက်ပေးရန်ကျေးဇူးပြုပြီးဖြစ်ပါသည် join ဖို့ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု စက်မှုလုပ်ငန်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အခွင့်အလမ်းများကို အုပ်စု။ ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုနှင့်အတူ, သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုအသုံးပြုပါ။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီနှင့်အတူအံ့သြဖွယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုရှာပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အလုပ်သစ်ရှာဖွေသူများနိုင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီ join။ သို့မဟုတ်ပင်ကျွန်တော်တို့ကိုအပေါ်ကိုဆက်သွယ် WhatsApp ကိုဒူဘိုင်း Group မှ.
Duba အတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း 2018- 2019 အတွက်ကျွမ်းကျင်သူများအတွက်ဖွင့်သည်။ ထိုမှတပါး, သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက် 2020 အတွက်ကုန်စည်ပြပွဲဂျော့ရှာဖွေနေစတင်နိုင်ပါသည်။ သို့သျောလညျးသငျသညျအစရှာတွေ့နိုင်ပါသည် ဒူဘိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုစတင်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေ။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်အများအပြားအလုပ်က်ဘ်ဆိုက်များသို့သင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင် upload တင်လို့ရပါတယ် ယူအေအီးအတွက်။ ၏ညာဘက်အခြမ်းတွင် ဤ blog post ကိုသငျသညျအကွံဉာဏျအနည်းငယ်ကောင်းသော-bits ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များအားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီရန်ပျော်ရွှင်ထက်ပိုပါတယ်။ ကြှနျုပျတို့မှာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအသစ်တခုလျှောက်လွှာဘို့စောင့်ဆိုင်းနေ။ ဒါကြောင့်ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ၏ CV ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
ယူအေအီးအတွက်အဖြစ်မှန်ဘယ်မှာအတွက်ဤမျှလောက်များစွာသောအရပ်တို့ကိုရှိပါတယ် သင်တစ်ဦးအလုပ်ရှာတှေ့နိုငျ။ ဥပမာအားဖြင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူ။ အမြဲတမ်းမျှော်လင့် ကောင်းစွာ-paid လုပ်သားများဖြစ်လာ။ သို့သော်ငြားလည်း, တစ်ဦးပြည်ပရှိအဖြစ်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ လုပ်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အရာဖြစ်လာဘူး။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအလုပ်အခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေလူတွေကိုကူညီပေးနေ။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကရည်မှန်းချက် တိုင်းအသစ်ကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူများအတွက် သူတို့ကိုနေရာရန်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်း၏ကောင်းစွာ-paid အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကိုပါ။ အဖြစ်မှန်မှာတော့ တစ်ဦးအလည်အပတ်အပေါ်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရတဲ့အတှကျအဆိုပါဗီဇာအချိန်ကြာပါတယ်။ ကောင်းပြီ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုအတွေ့အကြုံကနေ6လအတွင်းဝန်းကျင်။
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု, သင်ဖို့အများကြီးအနည်းငယ်သာသောအရာတို့ကိုသိရန်လိုအပ် အလုပ်သမားတစ်ဦးဖြစ်လာ။ သူတို့ထဲမှတစ်ဦးအထဲကရှာတွေ့ရှိပါသည် ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြှင့်တင်ဖို့ဘယ်လို။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစျေးကွက်ကအရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ကောင်းစွာ-paid အလုပ်အကိုင်များနေရာလွတ်ဖြစ်သည်။ သငျသညျရှာဖွေစုဆောင်းချဉ်းကပ်ဖို့ဘယ်လိုသိရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုသင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အပလီကေးရှင်းကိုစီမံခန့်ခွဲရန်။ သို့မဟုတ်ပင် ဘယ်လောက်မှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးချခံရဖို့။ ပြည်ပမှာနေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေ, သင်တချို့ဖတ်သင့် ဒူဘိုင်းနှင့် ပတ်သက်. အကြံပေးချက်များ သင်တစ်ဦးအလုပ်ရှာဖွေသူအဖြစ်ဒူဘိုင်းပြောင်းရွှေ့မီ။
အပြုသဘောဘက်တွင်, သငျသညျအလွန်ဖတ်သင့် အလုပ်ရှာဖွေဘို့ဒူဘိုင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အတှကျအသေးစိတျလမ်းညွှန်။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်, သငျသညျဗီဇာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများနှင့်အတူလက်၌အဆင်သင့်အများအပြားစာရွက်စာတမ်းများရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင်တို့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်နိုင်တတျနိုငျသရိုးရှင်းစွာအအဆိုးဆုံးအမှား။ မဟုတျပါဘူး အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာအလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုချက်ရတဲ့။ ဥပမာအားဖြင့်, ယူအေအီး၌သင်တို့တစ်အလုပ်လုပ်ဗီဇာရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တူညီသောလက္ခဏာသက်သေခြင်းအားဖြင့်, စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုကျနာဘူးသူတစ်ဦးအနည်းငယ်လူတွေအမြဲရှိပါတယ်။ နှင့်အဆုံး၌, သူတို့က အမ်းမရိတ်အတွက်ပိတ်ပင်ထားတဲ့နေကြတယ်.
အိုကေ, ဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင် အဲဒါထိုက်တန်ရဲ့လား။ အဖြေမှာဟုတ်ကဲ့!7စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌ကောင်းသောနေရာများအမြဲရှိသည် ကိုယ်ပိုင်ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့။ ဥပမာသင် Academic & University ကိုသင်စီမံနိုင်သည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပ်ရှာဖွေရေး။ ဥပမာ, ပင်လယ်ကွေ့ဒေသလမ်းညွှန်တှငျနထေိုငျ အမြဲအထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့။ နှစ်အနည်းငယ်လျှင်သင်အမှန်တကယ်အများအပြားအဘို့အတိုးနိုင်သည်ကိုဖော်ပြခြင်းမ ကောင်းစွာ-paid အခွင့်အလမ်းများ။ သင်တို့မူကားကောင်းတစ်ဦးပညာရေးရှိသည်ဖို့လိုအပျကွောငျးရဖို့။ အဆိုပါထောကျအကူပွုလကျစတစျခုဖွစျနိုငျသ ပညာရေးဆိုင်ရာ devices များနှင့် Ph.D.
ဒူဘိုင်းအတွက်ပညာရေး superbly အရေးကြီးပါသည်။ ရန်မထိုကဲ့သို့သောလမ်းရှိပါတယ် အထူးသဖြင့် MBA ဘွဲ့ရနှင့်အတူယူအေအီးအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာတွေ့ အတူကျွမ်းကျင်မှုမျိုးအများကြီးပိုလွယ်ဖြစ်သင့်သည်။ ဒါကြောင့်အထူးသဖြင့်အလုပ်အကိုင်နှင့်တိုးတက်မှုများအတွက်အလုပ်အကိုင်အများအတွက်သုတေသနအမြဲကောင်းသောကျောင်းများနှင့်အတူကြွလာ။ ဟုတ်ပါတယ်, သငျသညျအခြို့သောအခြေခံအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ရန်ကမ်းလှမ်းရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုမလုံလောကျဖွစျလိမျ့မညျ အကောင်းတစ်ဦးအဆင့်တွင်ဒူဘိုင်းတွင်နေထိုင်။ သင်တန်း၏, ယင်းစမတ်လမ်းသင့်ကိုယ်ပိုင်တိုင်းပြည်၌သင်တို့၏ပညာရေးပြီးအောင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
ပြီးတော့ဥပမာ, ဒူဘိုင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့, သင်ကြားရေးအလုပ်နေရာလွတ်။ သူတို့ကရန်လုံလောက်သောကောင်းပါတယ် သင့်ရဲ့ Arabic အဘိဓါန်ဘဝကိုစီမံခန့်ခွဲ။ ထို့အပွငျပင်အာရပ်စော်ဘွားပြည်ထောင်စုအဆင့်မြင့်ပညာရေးယဉ်ကျေးမှုပျော်မွေ့။ နည်းနည်းထွက်ရှာပေးပါ ယူအေအီးအတွက်လူနေမှုပုံစံစတဲ့အကြောင်းပိုမို။ ဒူဘိုင်းထိုမှတပါး, operating ဘယ်လို သငျသညျဒူဘိုင်းတှငျအဘယျသို့ပွုနိုငျ.
ဒူဘိုင်းအတွက်န်ထမ်းခေါ်ယူမှု WhatsApp ကိုအပေါ်စီးတီး
ဒူဘိုင်းတွင်ကောင်းသောအမှုကို်ထမ်းရှာဖွေသူရှာဖွေခြင်း။ လုပ်ဖို့လွယ်ကူတဲ့သဘောတူညီချက်မဟုတ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် rated စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများ top ။ အတော်ကြာချဉ်းကပ်မှုရှိပါတယ် LinkedIn အပေါ်ရှာဖွေစုဆောင်းရောက်ရန်။ သငျသညျကိုတိုက်ရိုက်လည်းစုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဤစကားမှန်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့နေဆဲအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းစံနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းစွာအစုဆောင်းဖို့တစ် CV ကိုအပ်လုဒ်တင်ခြင်း။ မှ Calling ဒူဘိုင်းအတွက် HR ကိုယ်စားလှယ်များ။ သငျသညျအထဲကကိုကူညီမိတ်ဆွေများကိုတောင်းဆိုနေတာ။ သူတို့ကတချို့လူတွေသိစေခြင်းငှါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအစဉ်အမြဲအလုပ်ရှာဖွေသူများအကြံပေးကအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ စံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်းလိုက်နာရန်ဖြစ်ပါသည်နှင့် ဒူဘိုင်းတွင်စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများများစာရင်းကိုကိုသုံးပါ။ တစ်ဘောလုံးကိုပြေးရရန်က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ပေးပို့ခြင်းနှင့်အပ်လုဒ်တင်အသေးစိတ်ကို။ ရေရှည်မှာခုနှစ်, ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်သင့်ပါတယ်။
ကျနော်တို့အမြဲပညာရှိရှိအင်တာနက်ကိုသုံးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူအကြံပေးနေကြသည်။ ဒီ tool ကအံ့သြဖွယ်နှင့်သင့်အဖိုးတန်အချိန်ကျိုးနပ်သည်။ အခြားသောလမ်းထားရန်, သင်လုပ်နိုင်သည် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အတွင်ကျယ်စွာသွားရောက်ကြည့်ရှု သို့မဟုတ်ပင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပြည်တော်ပြန်များအတွက်အကြံဥာဏ်ကိုအပိုင်းပိုင်းအရ။ ဒီသဘောတူညီချက်အရ, နေတုန်းပဲ, တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်အကောင်းဆုံးလူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာ LinkedIn တို့ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်တတ်နိုင်အဲဒီမှာတက် ရှာဖွေစုဆောင်းငှားရမ်းနှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်။ အဆိုပါ LinkedIn ကွန်ယက်ကိုအာရှနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတစ်ကြီးထွားလာလမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်လာသည်။ ဒါကြောင့်သင်ကကျိန်းသေတဲ့အစက်မရှိသောပရိုဖိုင်းကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်ကြောင်းအပေါ်အခြေခံပါတယ်။
သငျသညျကိုဘယ်လိုမှသိရကြလိမ့်မည်သေချာအောင်လုပ်ပါ ဆုပ်ကိုင်စုဆောင်းမှုမန်နေဂျာအာရုံစူးစိုက်မှု။ ထို့အပွငျသာလူမှုရေးစီမံခန့်ခွဲမှုသငျသညျအလုပ်အကိုင်များအတွက်ဆင်းသက်ကူညီပေးပါမည်။ နှင့်အများအပြားသွားရောက်ကြည့်ရှု ဒူဘိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်အကွံဉာဏျနှင့်အတူအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစာမကျြနှာ။ သင်သည်သင်၏အလုပ်အကိုင်အစာကိုသင့်ရဲ့အိမ်တံခါးမှလာသောအရာကိုအရင်းအမြစ်မှအဖြစ်မှန်အတွက်သိဘူး။ သင်သည်သင်၏အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေလည်း WhatsApp ကိုအုပ်စုတစုကိုစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
အသေးစိတ်ရှိသည်ဟုဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့် ဒူဘိုင်းမြို့ဧရိယာနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်။ သငျသညျပြည်ပရှိဖြစ်လာမှရှာဖွေနေပါကသင်သည်ထိုသူတို့အချို့လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကျွမ်းကျင်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ယခုမှာအခွင့်အလမ်းများများသင်တစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူများမိန်းမဖြစ်ကြောင်းကိုလျှင်ရှိပါတယ်။
နောက်ထပ်ကောင်းသောပညာရှိအကြံဉာဏ်ကိုအွန်လိုင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အတူစကားပြော မွမ်ဘိုင်းမှာရှိတဲ့အိန္ဒိယကျော်မန်နေဂျာနှင့်စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများငှားရမ်း။ Boom အတွက် GCC နိုင်ငံများ၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်း။ အပြုသဘောဘက်တွင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူ, သင်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ WhatsApp ကိုအလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်။ ဒါကြောင့်မိနစ်အနည်းငယ်ဖြုန်းဖို့တကယ်တန်ဖိုးနှင့် အခြားသူများနှင့်ဆက်သွယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအလျင်အမြန်စော်ဘွားအတွက်စုဆောင်းမှုအုပ်စုများ၏အမြန်ဆုံးဖန်တီးသူဖြစ်လာသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေသူများနှင့်အသုံးပြုသူအသစ်အများစုဟာကျနော်တို့နေ့စဉ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ WhatsApp ကို Group ၏တစ်ဦးချင်းစီမေတ္တာရှင်။ အများကြီးရှိပါတယ် အပြုသဘောရသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ဧည့်သည်များ ဒူဘိုင်းအလုပ်နေရာလွတ်ရှာတွေ့မှ WhatsApp ကိုအဖွဲ့များကိုသုံးနိုင်သည်။ ကျနော်တို့မေတ္တာရှင်အမြဲတမ်းနွေးနွေးထွေးထွေးအသစ်ကမိုဘိုင်းဖုန်းသုံးစွဲသူများကကြိုဆိုကြသည်။
ဒူဘိုင်းအသစ်အလုပ်အကိုင်များရှာဖွေရာတွင်၏အခက်ခဲဆုံးလမ်း။ တိုက်ရိုက်ကုမ္ပဏီများမှက်ဘ်ဆိုက်များသို့လျှောက်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ created ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီများသည်ဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်။ သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်ငှားရမ်းသူတစ်ဦးကြည့်နိုင်ပါသည်။ ထိုအခါအဘယ်သူသည် စျေးကွက်အပေါ်အကောင်းဆုံး? သငျသညျအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပ်လုပ်ချင်ပါတယ်လျှင်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ သငျသညျရည်ရွယ်ချက်များငှားရမ်းဘို့သင့် PR စနစ်မဟာဗျူဟာတွေအကြောင်းနည်းနည်းပိုထွက်တင်ဆောင်လာသော start သငျ့သညျ။
အဘယ်ကြောင့် GCC တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်စတင်ရန်ကတန်ဖိုးရှိပါသလဲ
ဥပမာအားဖြင့်, ထူးခြားတဲ့နှင့်ကောင်းစွာအသိအမှတ်ပြုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှိသည်ဖို့ကောင်းတစ်ဦးလမ်း။ နှင့်ကားအဘယ်သို့ အများဆုံးအသိအမှတ်ပြုစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ? ။ ဟုတ်ပါတယ်, ဒူဘိုင်းဟိုတယ် start7။ ဒါကြောင့်ရန်စမတ်ပြောင်းရွှေ့ဖွစျလိမျ့မညျ ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အလုပ်လုပ်စတင်ရန်။ ဗေီဧညျ့ကောင်းစွာ GCC နိုင်ငံများတွင်လူသိများသည်။ ဒီတော့ရေရှည်မှာ, သင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဤအမျိုးအစားစဉ်းစား start သငျ့သညျ။ အဘယ်ကြောင့်ဒူဘိုင်းဒီတော့အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါသည် ?. ထိုအ GCC ၌ထားကိုအကောင်းဆုံးများထဲမှ ?. က 0% ရာဇဝတ်မှုနှုန်းနှင့်အတူမြေကြီးပေါ်မှာရှိသောအလုံခြုံဆုံးနေရာများ၏တဦးတည်းသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အလုပ်အကိုင်များအမျိုးအစားပေါ်တွင်သင်အကြံပေးအဖြစ်။ သင်မည်သို့လုပ်နိုင်ထွက် Watch ဒူဘိုင်းရှိ Uber ကားမောင်းသူဖြစ်လာ။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ WhatsApp ကိုအုပ်စုတွင်အခြားသူများနှင့်ထုတ်စစ်ဆေးပါ။ သူတို့ကသင့်ကိုကူညီစေခြင်းငှါ Duba အတွက် ပို. ပင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ရွေးချယ်စရာများကိုရှာဖွေi.
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျယူအေအီးသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြသည်။ အဓိကအားဖြင့်ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်အကိုရှာဖွေ။ အကောင်းဆုံး သငျသညျစျေးကွက်အတွက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ ဤခေါင်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်. လုပ် 50,000 အသစ်က WhatsApp ကိုအုပ်စုတစ်စုကျော်ရှိပါသည်။ ဒါကြောင့်နည်းနည်းပိုထွက်ရှာတွေ့ကောင်းရှိလိမ့်မည်။ အကောင်းဆုံးကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းမှပြန်ရရန်။ ကြှနျုပျတို့မှာ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်အကိုင်အပေါ်အလောင်းအစား။ အလုပ်အကိုင်အဒီ type ကိုမှတ်ချက်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်အာရှလုပ်သားများထံမှပြည်တော်ပြန်အကြားတစ်ဦးလူကြိုက်များရွေးချယ်မှုကို Is ဒူဘိုင်းမှပြောင်းရွှေ့ဖို့ရှာဖွေနေကြသူကျွမ်းကျင်သူများ။ အဘယ်သူသည်အိန္ဒိယအနေဖြင့်လူငယ်တစ်ဦးကောင်လေးထံမှဖုန်းကိုဖြေဆိုဘယ်တော့မှခဲ့သလဲ ဖုန်းကိုကျော်ထုတ်လုပ်ထုတ်ကုန်ရောင်းဖို့ကြိုးစားနေကြသူ ?. ဟုတ်ကဲ့, ဒီဖြစ်ပါသည် ထို့အပြင်ဘောလီးဝုဒ်အတွက်စျေးကွက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု.
ထို့အပြင်ခေါ်ဆိုခစင်တာများကြီးထွားလာသည့် GCC စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလမ်းကြောင်းသစ်၌တည်၏။ ဒါကအလုပ်အကိုင်ကိုရှာဖွေဖို့အတွက်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျများမှာအထူးသဖြင့်လျှင် အိန္ဒိယကနေနှင့်ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေနေ။ ဒါကနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကူညီစေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်အခြားလူရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကောငျးမြားစှာရှိပါတယျ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအခွင့်အလမ်း။ သင်ပင်သတိထားမိမကျမည်အကြောင်း။ သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးပဲတခြားသူတွေနဲ့စကားပြောဖြစ်ပါတယ်။
ဤတွင်ထိုအရပ်၌သင်နှင့်ပတ်သက်ဖတ်နိုင်သည်။ သို့သော်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်း ကုမ္ပဏီသင်၏အချိန်ရကျိုးနပ်ပါလျှင်အထဲကရှာတွေ့။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်အတွင်း၌စတင်အလုပ်လုပ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ပြုမှအဆိုပါစမတ်လမ်းတစ်ဘို့သွားကြဖို့ဖြစ်ပါတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်အင်တာဗျူးအတွက် 1 ရက်ကြာလမ်းလျှောက်။ အောက်ပါနှစ်များတွင် google ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ အင်တာဗျူး၏ဤအမျိုးအစားနေ့တိုင်းကြီးထွားလာကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ 2018 အတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့ကိုစုဆောင်းကုမ္ပဏီကျနော်တို့ကအမြဲအသစ်အကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။ ရှာတွေ့ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခု ထိပ်တန်း 15 အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီများသည်ယူအေအီးအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, သင်ငှားရမ်းနိုင်သူတစ်ဦး deek အသိပညာရပါလိမ့်မယ်။ ထို့ပြင်အဘယ်အရာကိုလုပ်ခသင်ပင်မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျသို့ရရန်ကြိုးစားသင့်ပါတယ်အဓိကကုမ္ပဏီများသည်။ ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်ထတောက်ခဲ့သူကုမ္ပဏီများမှဖြစ်ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်အွန်လိုင်းရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ အလုပ်ရှာဖွေအတူ legit အကူအညီနဲ့ သငျသညျဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီနှင့်အတူရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအမြဲ အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့မှအလုပ်ရှာဖွေသူများကူညီပေးနေ။ ကျနော်တို့ကအမြဲတိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူလှုံ့ဆော်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။ ကျနော်တို့ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေအကြောင်းကိုအခွင့်အာဏာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအားမရနေကြသည်။ ထို့အပြင်ထို့နောက်တစ်ဦးအားမရ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာဆောင်းပါး နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ WhatsApp ကိုအုပ်စုတစု။ ကျနော်တို့ရေးသားနေကြသည် အဘယ်ကြောင့်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုဖွင့်ဖို့ကျိုးနပ်သည်။ ပြီးအများကြီးပိုဆက်စပ်ဖြစ်နိုင်သောသင်ကူညီစေခြင်းငှါသတင်းအချက်အလက်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသများသို့ရွှေ့ပြောင်း။
ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူရှိသောတက်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်ချင်ပါတယ်နောက်တစ်နေ့အနည်းငယ်စာကြောင်းများ။ နှင့် ပတ်သက်. အဓိကမေးခွန်းတစ်ခုကို ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်ပြည်ပမှာနေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဘယ်လိုစတင်သလဲ မြင့်တက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်တကွ, ကြီးမားတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်ပင်ယူအေအီးအတွက်ဒေသခံကုမ္ပဏီများနှင့်။ အကောင်းဆုံးကိုဘဏ္ဍာရေးစင်တာများအပါအဝငျ။ အောက်ပါနှစ်ပေါင်းယူအေအီးအတွက်အစိုးရအတူ။ စံချိန်စံညွှန်းများပြုစုပျိုးထောင်ဘို့အစီအစဉ်ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းစတင်ပါ။ အသစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေသူများ။ အထူးသဖြင့် ပါကစ္စတန်လုပ်သားများ ဘယ်သူမှရှာဖွေနေနေကြသည် ဒူဘိုင်းသို့ပြောင်းရွှေ့ပါ။ ယခု ပို၍ မြန်သောဗီဇာကိုစီမံနိုင်သည်။ သို့သော်ငြားလည်း, သင်သည်လည်းသင်၏ကိုယ်ပိုင်စံချိန်စံညွှန်းများပြုစုပျိုးထောင်ရန်လိုအပ်.
သင်ကကော်ပိုရိတ်အဆင့်မှာသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုပွငျဆငျဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ပေးယူအေအီးအရည်အချင်းများရိုးရှင်းတဲ့၏အသေးစိတ်မိတ္တူထားပါ။ သင်ကရှိပါက ပြီးသားကကြောက်မက်ဘွယ်င်။ အိမ်တိုင်းပြည်ကနေသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလက်မှတ်များဘာသာပြန်ထားသောနေကြသည်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ post ကိုသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ကတဆင့်ခွဲထားခဲ့သည်တောင်မှအခြားလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ။ ထွက်ပေးပို့ရန်နှင့်အစဉ်အမြဲအဆင်သင့် ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်စုဆောင်းမှုများအတွက်။ အဲဒါကိုသိသာဖြစ်နိုင်ပါသည်နေစဉ်, ဒါပေမယ့်မန်နေဂျာငှားရမ်း။ အထူးသဖြင့်သူတို့အားသူတွေကို အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအတွေ့အကြုံနှင့်အတူ.
သူတို့ရဲ့တစ်သက်တာအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကိုယ်ရေးရာဇဝင်တွေအများကြီးမြင်ကြပြီ။ ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမိနစ်သည်အထိမစောင့်ပါနဲ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒူဘိုင်းစီးတီးအိပ်ခြင်းနှင့်မြင့်တက်စံချိန်စံညွှန်းကိုဘယ်တော့မှ။ သင်ကထွက်ပေးပို့ခင်မှာတစ်ဖန်, သင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ဖြတ်သန်းသွားပြောင်းလဲမှုသို့မဟုတ်မလိုအပ်တဲ့အမှုအရာကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ ထိုအပင် LinkedIn ကနေနောက်ထပ်အတှေ့အကွုံရှင်းလင်းချက်များနှင့်အသစ် updated အကျဉ်းချုပ် add OK ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအထဲကရှာတွေ့မှတကယ်ကျိုးနပ်သည်။ ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနိုင် သင်သည်သင်၏အလုပ်ရှာဖွေအောင်မြင်မှုရောက်ရှိရန်ကူညီ.
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ WhatsApp ကိုအပေါ်ယောဘကိုရှာပါ
သင့်ရဲ့ထောက်ပြ နိုင်ငံခြားအလုပ်ရှာဖွေသူပရိုဖိုင်းကို App ကိုဖွင့်အဘယျသို့ထည့်သွင်းပါလိမ့်မည်ပါလိမ့်မည်။
ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင် WhatsApp ကိုထမ်းခေါ်ယူမှု
ငါတို့သည်သင်တို့ထံမှနားထောငျခစျြတင့်။ ရိုးရှင်းစွာအကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့သည် join ဖို့ရှာနေကြသူအသစ်ကပြည်တော်ပြန်များအတွက်ရှာဖွေနေပါသည်။ အကြောင်းမူကား, သူတို့အခွအေနမြေိုး, ကျွန်တော်တစ်ဦးဖန်တီး အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အမိုဘိုင်းဖုန်းစုဆောင်းမှုစနစ်က။ သငျသညျ WhatsApp ကိုထမ်းခေါ်ယူမှုချစ်ကြလျှင်ဒါ။ သငျသညျယခုသင့်အလုပ်အကိုင်အသေးစိတ်ဒူဘိုင်း၌အကြှနျုပျတို့၏မိုဘိုင်းစုဆောင်းဖို့ upload တင်လို့ရပါတယ်။
မှတ်မိဖို့ပထမဦးဆုံးအရာ? မင်းမသွားခင်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမှတ်ချက်စွန့်ခွာပါ။ သင့်ရဲ့အသေးစိတ်နှင့်အတူ, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့သွယ်ဝိုက်သငျသညျကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ငါတို့သည်လည်းရှိပါတယ် ဆော်ဒီအာရေဗျကုမ္ပဏီများအတွက်ငှားရမ်း။ ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည် အဆင့်မြှင့် CV ကို post ဖို့ထိုက်တန် ကျွန်တော်တို့ကိုရန်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ HR အဖွဲ့ကသင့်ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုက်ညီအောင်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျ WhatsApp ကိုအွန်လိုင်း်ထမ်းခေါ်ယူမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုထင်ပါသလဲ အကောင်းဆုံးကိုသာအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌တည်ရှိ၏။ ယခုကြှနျုပျတို့လည်းရှိပါတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့မှအမျိုးသမီးတစ်ဦးပြည်တော်ပြန်ကူညီပေးနေ.
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ Whatsapp ကျော်ယေဘုယျစုဆောင်းမှုန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါတို့သည်သင်တို့ထံမှမက်ဆေ့ခ်ျကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။ မေလကိုသိသူကားအဘယ်သူ ငါတို့သည်သင်တို့ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်ကာတာနိုင်ငံအတွက်အသစ်တခုပြည်ပရှိဖြစ်လာဖို့ကိုကူညီနိုငျ။ နောက်ဆုံးအမ်းမရိတ်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်စတင်ပါ။
နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခုနှစ်တွင်ကျေးဇူးပြုပြီး ဝေစု ၌အကြှနျုပျတို့၏ဆောင်းပါး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အခွင့်အလမ်းများကိုများအတွက် Google။ ကျနော်တို့ကဒီမှာရှိပါတယ် အခြားသူတွေ LinkedIn အပေါ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိကူညီနိုင်ရန်။ ကျနော်တို့ကအမြဲလာသောအခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်သောဧည့်သည်များပျော်ရွှင်ကြသည်။ အကြှနျုပျတို့အားလက်ပေးခြင်းနှင့် Facebook သို့မဟုတ် LinkedIn ပေါ်မှာငါတို့အကြောင်းအရာမျှဝေခြင်း။ ဤအချက်များအားအခြားသူများကိုသင်ကူညီနေတာပါ။ နှင့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းရှာဖွေစုဆောင်းဖြင့်သင်တို့ကိုချိတ်ဆက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် on LinkedIn တို့။
တစ်ဦးအလုပ်အကိုင်များအခွင့်အလမ်းများအတွက်အခွင့်အလမ်းကအမြဲတမ်းရှိပါတယ် ဒူဘိုင်း၌တည်၏။ ငါတို့သည်ပင်ရှိစေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်ကိုသိတော့မှ ဘဏ်လုပ်ငန်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများ မင်းအတွက်!။ ဒီတော့အဖြစ်အများကြီးသင်တတ်နိုင်သလောက်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါး share ပေးပါ။ အခြားသူများကိုကူညီပေးနေသူမည်သူမဆိုကောင်းမွန်သည်လို့ပဲ။ အဘယ်သူသည်အနာဂတ်တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်ကိုကူညီပေးပါလိမ့်အတွက်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိတယ်။ တဖန်သင်တို့စော်ဘွားတစ်အိပ်မက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျကိုစတင်ရန်စေချင်ပါနဲ့ ကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်စော်ဘွားတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ WhatsApp ကို Group မှရန်သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်သွင်းမေ့လျော့ကြသည်မဟုတ်လော ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ အရှေ့အလယ်ပိုင်းအတွက်အမြန်ဆုံးကြီးထွားလာ Whatsapp Group မှမှ !.